Kooxda chelsea oo soo tiigsatay booska afaraad kadib guushii xalay.
Home Horyaalka Ingiriiska Kooxda chelsea oo soo tiigsatay booska afaraad kadib guushii xalay.
Kooxda Chelsea gushii ay ka gaaray dhigooda new castle ayaa ka saaciday in ay soo galaan kaalinta afaraad horyaalka ugu xiisaha badan dunida ee premier league Xilli ciyaareedkan.
Xidigaha dhanka weerarka ee Blues ee kala ah Geruid iyo Werner ayaa kala dhaliyeen labadii gool ay guusha ku hanteen waxaana ay ciyaarta oo dhan ku gebagebeeyeen qeybta hore daqiiqadihii 31aad iyo 39aad.
Kala sareynta horyaalka ayaa aad la isugu dhegan yahay xilli ciyaaredkan waxaana hada hogaanka heysa kooxda Guardiola ee man city waxaana kaalinta labaad ku jirta kooxda man united halka sedexaad ay ku jirto kooxda leicester city kooxda afaraadna waa chelsea.
Previous articleFalanqeynta Kulanka RB Leipzig Vs Liverpool ee Champions League
Next articleLiverpool oo arkatay bedelka xidiga wadanka Holland Wijnaldum.